Chate Sat | Reliable freelancers for your business ချိတ်ဆက်... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
ချိတ်ဆက် Website နည်းပညာဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခြင်း
ချိတ်ဆက် website မှာ အသုံးပြုသူတွေပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေဖို့ အောက်ပါ နည်းပညာပိုင်း အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
1. Proposal List Update
ချိတ်ဆက် website ကို ဝင်ရောက် အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ project တွေမှာ လျှောက်ထားတဲ့ Freelancer proposal တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လိုတဲ့အခါမှာ ၊ log in ဝင်မှသာ proposal list ကိုမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလို Public အနေနဲ့ ပေါ်နေတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် Freelancer တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် Project များ လျှောက်ထားနိုင်အောင် ဒီ feature လေးကို ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
2. Hiding Bid Amount
အခုဆိုလျှင် Freelancer တွေဝင်ရောက်လျှောက်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏ(bid amount) ကို Freelancer အချင်းချင်းမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပဲ မိမိနဲ့လုပ်ငန်းရှင်သာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အရင်ဆုံးလျှောက်တဲ့သူရဲ့ဈေးကိုလိုက်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်လိုက်လျှောက်တာမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့် Project မှာဝင်လျှောက်ကျတဲ့freelancer တွေရဲ့ bid amount ကိုအရင်ကလိုပဲမြင်ရမှာပါ။
3. Sample profile overview
Freelancer တွေအနေနဲ့အလွယ်တကူ ပရိုဖိုင် overview ရေးလို့ရအောင် နမူနာလေးတွေကို ရေးပေးထားပါတယ်။
4. Job Description Tips For Project Posting
လုပ်ငန်းရှင် တွေအနေနဲ့လည်း ပရောဂျက်တင်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူနဲ့ အလုပ်ဖော်ပြချက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးပေးလို့ရအောင်ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ အလုပ်အမျိုးအစား ပေါ်မူတည်ပြီး Job Description Tips လေးတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
5. Introduction Video Upload
Freelancer တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆက် ဗီဒီယို ကို ကိုယ့်အကောင့်ရဲ့ ပရိုဖိုင် မှာတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သည့်အရည်အချင်းများကို ရှင်းပြထားသည့် ဗီဒီယို ကို မိမိရဲ့ profile စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခြင်း့ဖြင့် အလုပ်ခန့်တဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် လွယ်ကူသွားနိုင်စေရန်အတွက် ဒီ Featureလေး ကို ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
6. Freelancer Account Verification
မိမိအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ထားပြီးသောအခါ မိမိ အကောင့်ကို ချိတ်ဆက်အသိအမှတ်ပြု freelancer account ဖြစ်အောင် တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီ Feature ကို ထည့်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ချိတ်ဆက်မှာ freelancer တွေအရမ်းများတဲ့အတွက် အားလုံးနဲ့ယှဉ်ပြီး Projectတွေကို ပြိုင်လေ ျှာက်တဲ့နေရာမှာ အလုပ်ရှင်အနေနဲ့လည်း ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိအောင် information ပြည့်စုံတဲ့သူကို Verified ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ချိတ်ဆက်က ထောက်ခံပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
7. Changing Dashboard Interface
User တွေရဲ့ Dashboard Interface ကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားပြီး အရင်ကထက်မိမိရဲ့အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျမြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Freelancer အနေနဲ့ ရော Employer တွေ အနေနဲ့ရော ကိုယ်လျှောက်ထားခဲ့သည့် / တင်ထားခဲ့သည့် ပရောဂျက်အရေအတွက်များ၊ အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ပရောဂျက်များ စသည် တို့ကို ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်( Statistical Data) များဖြင့် ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် ပုံစံမျိုးကို ပြောင်းလဲထားတာာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Project များ၏အသေးစိတ်များကိုလည်း အရင်တုန်းကလို Dashboard မှာမဟုတ်ပဲ ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်အောင် Page သက်သက်နဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
8. Budget Confirmation and Project Agreement Process
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ freelancer တွေကို ရွေးချယ်လိုက်လျှင် ကိုယ် သုံးမယ့်ဘတ်ဂျက်ပမာဏကို freelancer က အတည်ပြုပြီးမှသာ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Freelancer တွေအနေနဲ့လည်း လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှအတည်ပြုလိုက်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏနှင့် ချိတ်ဆက်ရဲ့ Terms and Conditions ကို အတည်ပြုပြီး မှသာ ဆက်လုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်စပြီးသွားမှ ဘတ်ဂျက် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားတာမျိုး၊freelancer ဘက်မှ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ခဲ့လျှင် ဖြေရှင်းရလွယ်ကူအောင် ဒီ process အသစ်ကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Project Cancellation Policy အသေးစိတ်ကို ဒီ link မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
9. Blog Page Update
Freelancing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးစုံစုံလင်လင်ကိုလည်း ချိတ်ဆက် Blog Page မှာ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
10. Career Page Update
အခုဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှလစ်လပ်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို Career Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။